प्रादेशिक राजधानी दाङ नै उपयुक्त छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / प्रादेशिक राजधानी दाङ नै उपयुक्त छ
प्रादेशिक राजधानी दाङ नै उपयुक्त छ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता, स्लाइड February 8, 2018	0 239 Views
तिलकराम शर्मा ‘हिमाल’
प्रदे शसभा सदस्य, बर्दिया
तिलकराज शर्मा ‘हिमाल’ बर्दिया क्षे त्र नं. १ (२) बाट निर्वाचित प्रदे शसभा सदस् य हुनुहुन्छ । २०४० सालदे खि तिलकराज शर्मा ‘हिमाल’ बर्दिया क्षे त्र नं. १ (२) बाट निर्वाचित प्रदे शसभा सदस् य हुनुहुन्छ । २०४० सालदे खि राजनीतिक यात्रा थालनी गर्नुभएका शर्माले अहिले ने कपा माओ वादी के न्द्र बर्दिया इञ्चार्जको जिम्मे वारीसमे त बहन गरिरहनुभएको छ । युद्धकालको कष्टकर राजनीतिक काराबासको पीडा र भो गाइलाई शक्तिमा बदल्दै सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताइरहनुभएका शर्मा अहिले पार्टीको पो लिटव्यूरो सदस्यको पनि जिम्मे वारीमा रहनुभएको छ । उहासग प्रदे श सरकारको अबको काम र नागरिकको अपे क्षाबारे हाम्रा सहकर्मी गिरिराज ने पालीले गर्नुभएको कुराकानी प्रस् तुत गरे का छांै  । -सम्पादक
कसरी बिताइरहनुभएको छ जनप्रतिनिधि भइसके पछिका दिनहरु ?
जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भइसके पछिका दिनहरु अझै थप जिम्मे वारीपूर्ण तरीकाले बिताइरहे को छु । निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला सक्रिय राजनीतिक से वाको जीवन बिताइरहे को थिए । अहिले थप जिम्मे वारीसहितको नागरिक से वा गर्न पाएको छु । जनतामाझ जनप्रतिनिधिका रुपमा समृद्ध, शिक्षित र स् वस् थ समाजको परिकल्पना र यो जनाहरु को र्दै समय बिताइरहे को छु ।
कस्ता यो जनाहरु को र्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले को पहिलो आवश्यकता भने कै समृद्धि हो  । म निर्वाचित भएकै दिनदे खि कसरी बर्दियालाई आर्थिकरुपमा सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको कल्पना गरिरहे को छु । ती कुरा राजनीतिक जीवनमा पनि के लाउने गर्थें  । अहिले बर्दियाको आर्थिक समृद्धि, आधुनिक कृषिको विकास र विस् तार, औ द्यो गिक क्षे त्र निर्माणस“गै स् तरीय शिक्षा र स् वास् थ्यको विकासका यो जनाहरुको खाका तयार पारिरहे को छु । जनतालाई प्रत्यक्ष से वा पुग्ने विकासको अनुभूति गर्नसक्ने खालका यो जनाहरु के लाउ“दै आवश्यक सल्लाह र समन्वयको काम पनि त्यो स“गै अघि सारिरहे को छु । अझ भन्ने हो भन्ने बर्दिया र पश्चिम ने पालकै विकासको सम्भाव्यताको गृहकार्य र विकासको मो डे ल तयार पारिरहे को छु । बर्दिया तराई भए पनि विकासका हिसाबले पछि परे को जिल्ला हो  । न यहा“ स् तरीय शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने ठाउ छन् । न स् तरीय स् वास् थ्य से वा पाउन सक्ने स् वास् थ्य संस् थाहरु छन् । जो छिमे की जिल्लामा निर्भर छ । अहिले जनतालाई जिल्लामा स् तरीय शिक्षा र स् वास् थ्य पु¥याउने सो चमा लागे को छु ।
यो जनाहरु राम्रा रहे छन् । एक्लो प्रयासले सार्थकता पाउला त ?
मै ले हिजो को राजनीतिक जीवनमा पनि बर्दियाको समृद्धिका लागि विभिन्न यो जनाहरु बनाउ“दै ती यो जनाहरु पूरा गराउ“दै जनताको से वा गर्ने मौ का पाएको थिए“ । मै ले लिएका यो जनाहरु पूरा भएका थिए । के ही छुटफुटका यो जनाहरु हो लान् । ती पनि पूरा हो लान् । जनताले रुचाएको र पचाएको म एक कुशल राजनीतिकर्मी हु“ । अझ भन्ने हो भने बर्दियाको समृद्धि र जनताको से वा गर्न अहिले यो झन ठूलो अवसर हो  । त्यो अवसरलाई पूरा गर्नु मे रो दायित्व सम्झे को छु । यो जना बनाउने काम साझा हो । त्यसमा सबै को सहकार्य, सल्लाह र हौ सला आवश्यक पर्छ । यी कुरा पूरा गर्न बर्दियावासीहरु एकमत छौ ं । वामपन्थीहरुले चुनावी तालमे ल र पार्टी एकताको संकल्पका साथ अघि बढे काले हामी साझा बिन्दुबाटै समृद्ध बर्दिया यात्राको थालनी गरे का छौ ं ।
समृद्ध बर्दिया बनाउने त्यस् ता आधारहरु के –के छन् ?
बर्दियाको मुख्य समृद्धिको आधार भने कै कृषि र पर्यटन हो  । बर्दिया कृषिनिर्भर जिल्ला भएकाले यहा“को समृद्धिको पहिलो आधार कृषि र दो स्रो आधार पर्यटन हो  । अर्काे कुरा पर्यटनका लागि सरुयु नदी बर्दियाको अभिसाप र सम्भावना पनि हो  । त्यसलाई जल पर्यटकीय क्षे त्रका रुपमा विकास गरी बर्दियालाई धनी बनाउन सकिन्छ । तराई र नाका क्षे त्रको जिल्ला रहे को बर्दियाका नाकाहरु सुचारु गरी प्रदे श ६ र ७ स“ग व्यापारिक सम्बन्ध गा“स् न सकिन्छ । यी आधारहरु नै बर्दियाको र प्रादे शिक विकासका सम्भावनाहरु हुन् ।
प्रादे शिक विकासका के –कस्ता यो जना छन् ?
यो कुरा ठीक हो  । म प्रदे श सदस् यमा निर्वाचित भइसके पछि समग्र प्रदे शको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्छ । प्रदे श नं. ५ स“ग नाका पनि छ, हिमाल पनि छ  । जल, जंगल, जमिन सबै छ । प्रदे श नं. ५ प्राकृतिक स्रो तको अन्य प्रदे शहरु भन्दा धनी छ जसको समृद्धिको आधारहरु यिनै हुन् । हामीले यी स्रो तहरु सदुपयो ग गरी प्रदे शलाई नै समृद्ध बनाउन सक्छौ ं । जस् तै कपिलवस् तु धार्मिक पर्यटकीय क्षे त्र, पुर्वी रुकुम हिमाली क्षे त्र, बुटवल–भै रहवा, बा“के , औ द्यो गिक क्षे त्र र व्यापारिक क्षे त्र, बर्दिया कृषि क्षे त्र, दाङ, रो ल्पा, प्युठान र रुकुमलाई ऐ तिहासिक युद्ध पर्यटकीय क्षे त्रका रुपमा विकास गरी पर्यटकीय, व्यापारिक, उत्पादन र औ द्यो गिक क्षे त्रका रुपमा विकास गरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ । अझ दाङको हकमा कुरा गर्न हो भने दाङ कृषि, पर्यटन व्यापारिक र प्राकृतिकरुपमा सबै पर्याप्त भएको जिल्ला हो  । यसलाई जुन ‘मो डे ल’ मा विकास गरे पनि यो समृद्ध बन्न सक्छ । नवलपरासी, गुल्मी, अर्घाखा“ची पाल्पा पहाडी क्षे त्र रहे काले पर्यटकीय क्षे त्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्रादे शिक विकासका आधारहरु यिनै रहे काले अबको प्रदे श सरकारले प्रदे शभित्र रहे का विकासका सम्भावनाहरुको अध्ययन गरी समृद्धिका यो जनाहरु लागु गर्ने छ । प्रदे श सरकार गठनपछि सम्भावनाको अध्ययन र छनो ट गरी स्रो त बा“डफा“ड गरी प्रादे शिक विकासका लागि तीब्रताका साथ काम गर्ने छांै  ।
स्थानीय तहले पनि यो जना बुन्दै छन्, प्रदे श सरकारले पनि यो जना बुन्ने काम कहिले गर्ने ?
मुलुकले भर्खर समृद्धिको बाटो पहिल्याउ“दै छ । राजनीति संक्रमणको अन्त्य हु“दै छ । निर्वाचनपछिको जो श र उत्साह पनि नौ लो छ । संघीयताको अभ्यास पनि मुलुकमा पहिलो हो  । जसका कारण के ही तालमे ल मिल्न नसके को हो ला । तर प्रदे श सरकार गठनपछि ती कुराको समाधानको बाटो निस् कने छ । विकासले पूर्णता पाउने छ । यसका लागि संविधान कार्यान्वयन नै पहिलो आवश्यकता हो  । के ही सातामै पूर्णता पाउने नया सरकारको गठन हुने छ । नया“ सरकारले समृद्धिको स् िपरिटमा दौडाउने छ ।
कहिले बन्छ प्रदे श सरकार ?
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको २० दिनमै प्रदे श प्रमुखले संसद बै ठक बो लाउने हुने छ । संसद बै ठक सम्पन्न भएको अर्काे २०÷२२ दिनमै प्रदे श सरकार गठन हुने छ । जसका कारण प्रदे श सरकार फागुन मसान्तसम्म बन्न सक्छ ।
संघीय कानूनका कुरा उठाउनु भएन नि ? स् थानीय तहको कानुनी अन्यो ल जटिल छैन र ?
अहिले सबै कुरा संविधानको परिधिभित्रै रहे र भएका छन् । संघीय सरकार बने पछि संघीय संरचना स् थायित्व हुने छन् । संविधानले दिएका सबै अधिकारको उपयो ग गर्दै कानून निर्माण गरिने छ । तपाइ“ले जुन कुरा गर्नुभयो स् थानीय तहको कानुनी अन्यो लताको विषय त्यो अभ्यास नभएर मात्रै हो  । कानूनले दिएका कुरा लागु गर्न नया“ अभ्यासकै कारण अलमल परे को छ । त्यो पनि प्रदे श सरकारले कार्यविधिहरु निर्माण गरी काम गर्ने छ । छो टो रुपमा भन्दा संघीयता भने कै के न्द्रितकृत व्यवस् थालाई समान वितरण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस् था हो  । त्यो स् थानीय तह आफै ले गनेर् र गराउने हो  । जो स् थानीय तहको जटिलताको समाधानको उपाय हो  ।
प्रदे श नं. ५ को अस् थायी मुकाम जुन तो किएको त्यो न्यायो चित भएन भन्दै बिरो धका आवाज उठे , त्यसलाई तपाइ“ले कसरी चिर्नुहुन्छ ?
प्रदे श नं. ५ को प्रादे शिक राजधानीको अस् थायी मुकाम जुन तो कियो त्यो भौ गो लिक समदूरीका रुपमा न्यायो चित भएन । तत्कालको कामकाजका भए पनि प्रदे शका
पश्चिम क्षे त्रका नागरिकहरुबारे बे वास् ता गरिएकै हो  ।
यो कुरा हामीले निरन्तर उठाउ“दै आइरहे का छांै  । सरकारले गरे को कामलाई हामीले गल्ती भन्न पनि मिल्दै न । तर अब प्रादे शिक राजधानीको मुकामलाई स् थायी बनाउदा सबै तिर न्याय हुने गरी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै दलहरु साझा सहमतिकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । त्यो साझा मिलन बिन्दु वा सहमति भने कै भौ गो लिकरुपमा दाङ हो  । प्रादे शिक राजधानीका लागि भौ गो लिक समदूरीका रुपमा दाङ नै उपयुक्त छ । त्यो हामीले निरन्तर भन्दै आइरहे का पनि छौ ं । भे गिय स् वार्थका लागि सबै ले कुरा उठाउने हो भने हामीले राजधानी बर्दियामा राख्नुपर्छ भनौ ंला । तर त्यो सबै लाई न्याय हु“दै नन नि । त्यसै ले प्रदे श नं. ५ को राजधानी दाङ नै स् थायी बन्नुपर्छ ।
पार्टी एकताको कुरा कहा पुग्यो ?
हामीले तालमे ल गरे र चुनाव लड्यौ ं । संयुक्त घो षणा पत्र बनायौ ं । तर मिडियामा अनावश्यक कुराहरु सुनिन्छन् । त्यो साचो हो इन । पार्टी एकताकै लागि दुबै दलका
अध्यक्ष छलफलमै हुनुहुन्छ । के ही काम सकिसके को छ । के ही मात्रै पूरा हुन बाकी छन् । ती पनि छिट्टै पूरा भइ पार्टी एकता चा“डै टुंगिन्छ  । यसमा धे रै कुरा गरिरहन आवश्यक छै न जस्तो लाग्छ  ।
अन्त्यमा थप के ही भन्नुहुन्छ ?
सबै ले नराम्रो भने राम्रो पनि नराम्रो बन्छ । राम्रो सो चको विकास गरांै समृद्ध समाज र राष्ट्रको परिकल्पना गरौ ं, त्यो अवश्य पूरा हुने छ ।
Previous: रकम नपुगे माग्नुस्ः राज्यमन्त्री रज्जाक
Next: मालपो त र भूमिसुधार प्रमुखविहीन